China ROCK ARM & BOOM fekitori uye vanotengesa | Bonovo
Hurefu hwese （mm) 8600 8800 9100 9500 9800
Boom Kureba （mm) 5600 5850 6100 6300 6500
Hurefu （mm) 3300 3400 3500 3750 3950
Kurema （tani) 14 16 18 20 20
Pasuru Urefu （mm) 3420 3420 3440 3620 3850
Yakapfupiswa inorema basa dombo boom ruoko nesimba rakasimba rekuchera rinoshandiswa zvakanyanya mukuchera, kuvaka mugwagwa, kuvaka dzimba, kuvakwa kwevhu rakaomeswa uye mamwe marudzi emapurojekiti.Ziri nyore kutyora ivhu rakaomarara zvakanyanya uye pasi esimende. Inoshanda zvakanyanya kupfuura hydraulic sando inogona kuita mune yakatarwa basa mamiriro.
Kureba kweruoko kwakapfupiswa uye kurema kweruoko kwakawedzera, kuchinjisa chikamu chepamusoro nechepazasi zvikamu zviviri zvine fulcrum nyowani uye simba re silinda ine simba. Zvese izvo zvinoita kuti kukuvadzwa kwemigodhi kugona kwechigadzirwa chedu kuve kwakatanhamara kupfuura zvakajairika.
Iyo yesainzi uye inonzwisisika dhizaini dhizaini uye yakagadzika yekugadzira tekinoroji haingopfupise maawa ekushanda asiwo inoderedza mashandiro emutengo we excavator.
Zvadaro: ROCK RIPPER
diki rekuwedzera ruoko
katatu akawedzera ruoko